बैतडीका भगवती मन्दिरमा नवरात्रीको पूजा सम्पन्‍न- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २९, २०७८ तृप्ति शाही
बैतडी — कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि सुदूर नेपालका पहाडी जिल्लाका शक्तिपीठहरुमा घटस्थापनादेखि नै ठूलो घुइँचो लागेको थियो ।
बैतडीका धार्मिक स्थलहरुमा नवरात्रीभर दर्शनार्थीको भीड लागेको थियो । जिल्ला बाहिर रहेका यहाँका स्थानीयहरु दसैं मनाउन आफ्नो थातथलो फर्केका छन् । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट पूजाका लागि दर्शनार्थीहरु बैतडीका शक्तिपीठ पुगेका थिए । यतिबेला यहाँका भगवतीका मन्दिरहरुमा पूजाआजा भइरहेको छ । मन्दिरहरुलाई विशेष रुपमा सजावट गरिएको छ ।
खासगरी दसैंको नवरात्रीका अवसरमा बैतडीवासी घटस्थापनादेखि नै विभिन्न शक्तिपीठमा बसेका थिए । यहाँ शक्तिपीठहरुमा वर्षको चार पटक भन्दा बढी विशेष पूजाआजा हुने गरेको छ । यहाँ भगवतीका मन्दिरमा दसैंको समयमा र वार्ष मेला जात्राका बखत विशेष पूजा हुने गर्छ ।
जिल्लाका त्रिपुरासुन्दरी, निङलाशैनी, डिलाशैनी, मेलौली, कफलाशैनी, फाल्ङासैनीलगायतका भगवती मन्दिरहरुमा सामूहिक रुपमा जमरा राखेर घट्स्थापनाको दिनबाटै पूजाआजा सुरु भएको हो । यस्तै, महारुद्र, उदयदेव, सिगास, दोगडाकेदारलगायतका मन्दिरहरुमा पनि सामूहिक रुपमा नवरात्रीभरि पूजा भएको थियो । कूल देवतालाई पूज्नको लागि जिल्ला बाहिर रहेकाहरु पनि यो बेला पुख्यौली घर फर्किने गरेका दशरथचन्द नगरपालिका—४ का गणेश भण्डारीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका भगवतीका मन्दिरहरुमा घटस्थापनादेखिनै दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गरेको थियो । दसैंको अवसरमा नवरात्री उपासना गरेर पूजाआजा गर्ने चलन रही आएको छ । शक्तिपीठहरुमा पूजाआजा गरेमा मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास रहेको उनले बताए ।
बैतडीको प्रसिद्ध निङलाशैनी भगवती मन्दिरमा मंगलबारदेखि जात्रा पनि सुरू भएको थियो । महासप्तमीका दिन सुरू भएको जात्रा महाष्टमीका दिन बलिसहित सम्पन्‍न भयो । महाष्टमीका दिन निङलाशैनी भगवतीको विशेष पूजाआजा सम्पन्न भएको निङलाशैनी भगवती धार्मिक सेवा समितिका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले बताए । अष्टमीमा निङलाशैनी भगवती मन्दिरमो भाकल गरेकाहरुले बोका र रांगाको बलि दिने धार्मिक परम्परा रहेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७८ ११:५८
काठमाडौँ — केटाकेटी बेला कहिले दसैँ आउलाजस्तो लाग्थ्यो । त्यो बेलै त्यस्तो रहेछ । अहिले त दसैँ आउँछ, जान्छ, खासै मतलब हुँदैन । २००५ सालको कुरा हो । म ८ वर्षको थिएँ । त्यही वर्ष म सलकपुरस्थित बाको मामाघर पढ्न भनेर गएको थिएँ । किनकि, त्यसबेला हाम्रो गाउँमा कुनै विद्यालय थिएन ।
म झापाको मान्छे । सलकपुरचाहिँ इलाम जिल्लामा पर्छ । बाको मामा पण्डित पदमलाल घिमिरेले त्यहाँ प्राथमिक स्कुल खोल्नु भएको थियो । त्यो स्कुल भर्खर–भर्खर खुलेको थियो । त्यहीँ मैले ए, बी, सी, डी चिन्ने अवसर पाएँ । पछि उहाँको छोरा डा. भोजराज घिमिरे मुख्यसचिव पनि हुनुभयो ।
केटाकेटी बेलाको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भने नयाँनयाँ कुरा गर्न मन लाग्छ । तर सोचेजति त के गर्न पाइन्छ र ? त्यसबेलाको लवाइ–खवाइ, रहनसहन सम्झँदा आज पनि हाँसो उठ्छ । त्यसबेला केटाहरूले हाफ पाइन्ट पनि लगाउने चलन थिएन । लगौँटी लगाउने, एउटा कमिजसम्म माथि हुन्थ्यो । कोही कोहीको कमिज कम्मरसम्म आइपुग्थ्यो भने कोही कोहीको अलि छोटा हुन्थे ।
मेरो त्यसबेला भर्खर ब्रतबन्ध गरेर जनै काँधमा हालिदिएका थिए । बाको मामाघरमा पढ्न गएको, लगौँटीमात्र लगाएर नाङ्गै चुलामा गएर भात खाएको निकै सम्झना हुन्छ । ३/४ महिना त्यहाँ बसेपछि दसैँ आयो । बा लिन आउनुभयो । अनि दसैँमा घर आइयो । बाले नक्सलबाडीबाट एउटा नयाँ जाँघे (हाफ पाइन्ट) ल्याइदिनु भयो । किनभने नक्सलबाडी बजार हाम्रो घरबाट नजिकै पर्थ्यो, पर्छ ।
घरमा दसैँ मनाइवरी फेरि बूढामावली पढ्न भनेर आइयो । सलकपुरमा मेरै गाउँका अर्का एकजना साथी पनि पढ्न बसेका थिए । हाम्रो बीचमा निकै मिल्ती थियो । एकदिन हामी दुवैजना मिलेर सलकपुरबाट भाग्ने सल्लाह गर्‍यौँ । र, भाग्यौँ । किनभने, सलकपुरको माथि डाँडामा गएपछि त्यहाँबाट हाम्रो गाउँ माथिको डाँडाको पीपलको बोट देखिन्थ्यो । त्यो पीपलको बोट देख्नासाथ ‘होमसिक’ भइहाल्ने ! त्यो पीपलको रूख देख्नेबित्तिकै घर सम्झेर रून मन लाग्थ्यो । घरको अति नै याद आउँथ्यो त्यसबेला । हामी सलकपुरबाट भागेर तिहारअघि नै घर आयौँ । केटाकेटी बेला त्यसरी ‘होमसिक’ हुँदोरहेछ ।
हामी सानो छँदा गाउँमा कात्तिके मेला लाग्थ्यो । मेलामा जान भनेर दसैँमा एकआना, दुईआना पैसा भेला गरेर राखिन्थ्यो । वर्षभरि जम्मा पार्दा बडो मुस्किलले एक, दुई रूपैयाँ हुन्थ्यो । त्यति भएपछि त ‘राजै’ होइन्थ्यो नि ! मेलामा सामान निकै सस्तो पाइन्थ्यो । नेपाली पैसा हुँदैनथ्यो । भारतीय सिक्का नै चलनचल्तीमा थियो ।
पैसा जम्मा गरेर बजार जाने निकै रहर हुन्थ्यो । त्यसबेला दसैँमा कत्रो उत्साह र उमङ्ग हुन्थ्यो ! बाफ् रे बाफ ! ! भनेर के साध्य । हाम्रो गाउँमा ठुटेबजार लाग्थ्यो । अहिले पनि ठुटेबजार छ । अहिले त्यस ठाउँमा शान्तिबजार बनेको छ । हाम्रो गाउँ बुधबारेभन्दा पारिपट्टि पर्छ ।
त्यसबेलाको मलाई धेरै कुरा सम्झना हुन्छ । घरमा दसैँ मनाएको, दसैँपछि मामाघर गएको, एकाना, दुआना पैसा भेला गरेको कुरा सम्झँदा पैसाको कति महत्व हुने रहेछ जस्तो लाग्छ ।
त्यसबखत हाम्रो परिवार ठूलो थियो । घरभरि मान्छे हुन्थे । वर्षमा एक पटक दसैँमा नयाँ लुगा हाल्ने चलन थियो । दसैँ आएपछि मन प्रफुल्ल हुन्थ्यो । छुट्टै कौतुहलता हुन्थ्यो । दमाई दाइलाई घरमै बोलाएर लुगा सिलाइन्थ्यो ।
हाम्रो गाउँमा एकजना कैयाँको कपडा पसल थियो । बा, हजुरबाले तिनै कैयाँको पसलबाट थानै कपडा ल्याएर दमाईलाई सिलाउन दिने चलन थियो । गाउँमा मारबाडीलाई कैयाँ भनिन्थ्यो ।
वर्षभरि झुत्राझाम्रा लुगा लगाएर गुजारा गर्नुपर्थ्यो । सद्दे लुगै हुँदैनथ्यो । दसैँअघि दमाई घरमै आएर परिवारका सबैलाई नयाँ लुगा सिलाइदिन्थे । दमाई हाम्रो घरमा १०–१५ दिन बसेर लुगा सिलाइदिन्थे ।
त्यसबापत उनलाई दाइँ गरेपछि धान, चामल दिने चलन थियो । दसैँमा खसीको पुच्छरपट्टिको भाग अर्थात् पुच्छरैसहित काटेर दमाई भाग राखिदिने चलन थियो । सायद अहिले यस्ता प्रचलन हटिसके होलान् । समयसँगै धेरै कुरा बदलिन्छ । बदलिनु पनि पर्छ ।
हामीलाई बाहिरका अरू कुरा केही थाहा हुँदैनथ्यो । घरमा हुने गतिविधिहरू थाहा हुने हो । जे भए पनि केटाकेटी बेला दसैँ रामाइलो हुन्थ्यो । कहिले दसैँ आउलाजस्तो लाग्थ्यो । त्यो बेलै त्यस्तो रहेछ । अहिले त दसैँ आउँछ, जान्छ, खासै मतलब हुँदैन ।
(बराल प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत हुन्)
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७८ ११:३३